Kusongelwa ohlela umcimbi wokugubha usuku lwabantu abasha eHarding – Isambane News
Home > Breaking News > Kusongelwa ohlela umcimbi wokugubha usuku lwabantu abasha eHarding
Kusongelwa ohlela umcimbi wokugubha usuku lwabantu abasha eHarding
June 15, 2018 June 15, 2018 Isambane News
SamaJobe Zulu – Uhlalelwe ovalweni owesilisa wase-Harding endaweni yaseSantombe ku-Ward 1 esingeke simdalule ngenxa yokumvikela. Ngokusho kwakhe uthi uthole ucingo luvela enombolweni angayazi, uthe uma eyibamba kwakhuluma owesilisa osongayo wabe esephuthuma eqopha le nkulumo. Isambane news liyizwile le nkulumo. Lona osongelwayo ungomunye wabe-Ambitious Team,okuyiqembu labantu abasha elisungulwe kulonyaka ukuhlela imicimbi eqondene nabantu abasha. Alikho icala elivuliwe okwamanje, kodwa amalungu waleli qembu athembise ukuya emaphoyiseni wase-Harding khona namuhla.
Umthombo osondelene nekhansela le ndawo, uCllr. Sonengaliphi Maphumulo, uthe incwadi yathunyelelwa emaphoyiseni ukuba abe khona endaweni lapho kuzoba kwenzeka khona umcimbi, iSambane News liyibonile le ncwadi. Lowo obesongelwa uthi uqale wangathuka kodwa ngokuhamba kwesikhathi waba nalo uvadlwana, “Ngiyasaba impela-ke manje, angikaze ngazifaka ezindabeni ezithinta ipolitiki kuphela nje ngabelana imibono nabaholi,” kubeka yena.
Kuke kwaba nezinkinga kulona leli sonto ngalomcimbi, ubakaMasipala uMuziwabantu Municipality befuna ukubalaxaza ekugcineni. Umnumzane Mlekeleli Maphumulo, ongusekela sihlalo kwi-Ambitious Team uthe uthole ucingo olumbizela emahhovisi kaMasipala, nokuyilapho ethole khona ukuthi bebefuna ukuhlehla ngabakwethembisa ngenxa yokuthi kukhona ebebengakuqondi kahle. Ikhansela le ndawo, uMaphumulo okunguye owacela uxhaso lwakamasipala uthe ngokwakhe ayekucelile kusenjalo akekho obuyele kuye wamtshela ngoshintsho, “Kunjengoba ngangishilo, itende nezinsiombi zokudlala sizozithola. Akekho obesekhulume name ngoshintsho, amahlebezi ngiyawezwa kodwa angiwaqinisekisi ngoba akekho oze kimi wangitshela okuthize,”
Umcimbi uzobanjelwa enkundleni yezemidlalo eCekeza, umcimbi uzoqala ngele-9 ekuseni. Igama lo mcimbi ubizwa nge-Youth Day Celebration.
“NGEKE NGIKUTHOLE UKUPHUMULA NGINGAKAZI ABABULALI BENDODANA YAMI” – SAM MEYIWA
‘UMbeje uphilile walifeza icebo likaNkulunkulu’